Ninna Maankii ma saluugo - Hoyga Aqoonta
Laga bilaabo1illaa2 1 2 >
Nambarka Xubinka : 1035
Taariikhduu xubinku is qoray golaha: Dec 2014
ka qayb galka: 3
Waxaa la qoray : [ 08-12-2014 ]
Mowduucii hore : Ninna Maankii ma saluugo -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Maruf
Warqad gaara u dir Maruf
Raadi qoraalladuu qoray/qortay Maruf
Wallaahi waa mid adag balse, aan ka soo fekero wax ii qashana raadsado Amin Maruf gacmo furan ayaannu kugu soo dhowaynaynaa dhammaantayo. Laakiin sxb in su'aal fudud aad ku bilowdid miyaanay ku fiicnaan lahay? kkkkk. Wax fura lama waayayo inshaa'allaah adna mar kale si gooniya aan kuu soo dhaweeyo ee soo dhowow.
Waxaa la qoray : [ 09-12-2014 ]
waad mahadsantahay sxb Afrikaan Waan kaa gudoomay soo dhaweyntaada wacan. Hhhhh waxaan hubaa inaa tihiin dad u saaxiib ah Xujada iyo Hal-xidhaalaha, sidaa awgeed baan furfurasho ka dhigay midaan.
Aaway Asxbta kale waan sugooyaa.
waad mahadsantihiin dhamaantiin.
Taariikhduu xubinku is qoray golaha : Dec 2011
ka qayb galka : 127
horta kama jawaabayo ee waxbaan ku darsan muran yar ileen muran ma dhaafaynee. Maxay tahay Maruf dahabka midida loo qaaadanayo kkkk. runtii waa xujo igu adkaatay ee bal abwaan cabdirabi iyo raadiya abwaan xasan xaashi mahadsanid maruf
waad mahadsantihiin dhamaan axbta. Afrikaan waad ku mahadsantahay soo dhaweynta diiran.
haa su'aashan midida dahab way goysaa, Kismaayana 7 cisho ayaa loo soconaa, ok wax walbo u qaado siday tahay.
heedhe Meey asxbtii kale Hhhhhhhh
Taariikhduu xubinku is qoray golaha : Dec 2014
ka qayb galka : 3
waad mahadsantihiin dhamaan axbta. Afrikaan waad ku mahadsantahay soo dhaweynta diiran. Hhhh waxaan ku ogahay meesha dad maanka u saaxiib ah.
Awaay abawaanadii u saaxiibka ahaa Hal=xidhaalaha.
Waxaa la qoray : [ 03-01-2015 ]
Haddaan isku dayo Maruf
Marka hore 4 qaybood oo meeli tahay 2 hal hal kiilo ah.
Maalinta u horraysa waxaad siinaysaa kiilo
Maalinta ku xigtana kiiladii ka qaad oo sii 2 kiilo
maalinta 3aadna hal kiilo sii
maalinta 4raadna ka qaad halka kiilo oo 2 kiilo sii.
maalinta 5naadna sidoo kale ha
l kiilo sii
6xaadna sii halkii kiilo ka qaad oo sii labo kiil
maalinta 7aadna halkii kiilo sii
sidaasaana lagu kala jooga
Inaan soo dhaweeyaan u malayn
Ka qayb galkan waxaa horay u qoray oo diyaariyey samiira
Waad mahadsantahy. dadaalkaaga ma yara, lkn midida waxaad isticmaashay 3 mar waxaana laguu ogolyahay 2mar. mida kale habeen uu leeyahay 3 kiilo ma siin kartid 2 ama 4 kiilo habeen walbo tirada ay tahay oo kiilo ayuu kaa rabaa sida
habeen 1aad= 1 kiilo dahab
habeen 2aad= 2 kiilo
habeen 3aad=3 kiilo ok siddaa ku soco
Waxaa la qoray : [ 10-01-2015 ]
asc marka hore salaan qaali ah ka dib hadaan isku dayo kawaabta
horta mindida waxa ay tiiba leedahay 2af ama 2bada dhican af ayey ku leeyihiin saas haddii ay tahey
waxa uusameynaya waxa uu 4-ta af ee mindiyaha isticmaalayaa 4 times ama afar mar waxa uuna dahabka ka dhigayaa 2bo meel ah 2bo kale oo meel ah 1 meel ah 1 meel oo kale oo meel ah iyo mid kale waa
waxa jaridda uu isticmaaley four times oo ah four edges of de 2 knives
habenka 1aad mid sii
habeenka 2aad mid kale sii
habeenka 3aad mid kale sii
habeenka 4aad mid ka celi oo labo isku dhagan sii ( waa tii habeenka 3aad iyo 4aad)
habeenka 5aad middi aad ka ceshatay sii
habeenka 6aad ka qaado oo 2bo isku dhagan siih( waa tii habeenka 5aad iyo 6aad)
habeen 7aad middii kuu hartay oo habeynkii 6aad aadka ceshatay sii
plz haddaan qaldanahay iyo haddii kaleba jawaab
Saacaddu hadda waa 12:45 AM.